Maitiro Ekuwedzeredza Vateereri Kubatanidzwa uye Kuwana Mhinduro | Martech Zone
Kugadzira buzz yakakomberedza bhizinesi uye kuita kuti yako tarisiro vateereri vafarire zvigadzirwa zvako kana masevhisi ndiyo yekutanga nhanho yekuvaka nharaunda yakatendeka. Munguva pfupi, izvi zvinogona kutungamira kukuwedzera traffic uye kutengesa. Mukufamba kwenguva, izvi zvinogona kumisikidza legion yemamishinari echiratidzo anoshanda zvakanyanya sechikwata chevatengesi veguerilla. Sezvo kuhwina pamusoro pemwoyo yehuwandu hwevanhu kunonyanya kutsamira pakuita kwevateereri, zvakakosha kushandisa zvinobudirira maitiro ekubatanidzwa uye tora mhinduro. Heano mamwe matipi anozokubatsira iwe kuupwanya uye kuita kuti bhizinesi rako ribudirire.
Dzimwe nguva, vanhu vese vanodikanwa ndeyekunyengerera kudiki uye nekunyengerera kwekunyengerera kuti vakurudzirwe. Nekudaro, kunzwisisa simba rekufona kuti chiitwe uye kuzviisa mukuita kunogona kukurumidza kuvandudza kubatikana kwevateereri. Paunenge uchigadzira zvemukati zvekushambadzira, zvakakosha kuti ushandise pane rako basa rakaomarara nekubatanidza imwe mhando yekufona kuti uite kuti vateereri vako vatore nhanho inotevera. Izvi zvinogona kunge zviri kupindura kumubvunzo pakupera kweblog blog kuti itange hurukuro kana kutora vashanyi kuti vasainire iyo email nhau saka unogona kugadzira hukama hwepedyo.
Paunenge uchishandisa kufona kuti chiitwe, zvakakosha kuti uiise panzvimbo chaiyo uye uite kuti itevedzere kuenderera mberi kunonzwisisika. Muzviitiko zvakawanda, izvi zvichaiswa kumagumo ezvinyorwa mushure mekupa kukosha uye / kana kupindura mubvunzo. Mushure mekuzviratidza kwako kuva neruzivo uye kuvimbika, vateereri vako vanofanirwa kunzwa kugadzikana nekubatana. Ino inguva yakakwana yekubatanidza kufona kwekuita uye kuita kuti vanhu vapindirane pane imwe nhanho.
Kunyangwe hazvo nyika nemabhizimusi maitiro ave akawanda otomatiki uye asina hunyanzvi munguva pfupi yadarika, vanhu vazhinji vachiri kushuvira kubata kwevanhu. Hazvina mhosva kuti tave vemberi sei tekinoroji, bhizinesi rakanaka rinonyanya kubva pahukama uye kugadzira kubatana nevatengi. Ndosaka uchibvumira hunhu hwako kupenya kuburikidza nezvako zvemukati uye kuve unogonesa zvinobatsira kwazvo. Panzvimbo pekuhwanda mumumvuri, zvakanakira kuve pachena uye varege vakuzive pane imwe nhanho yemunhu. Izvi zvinogona kuitwa nenzira dzakasiyana siyana:
Uchishandisa toni ine hushamwari paunenge uchigadzira zvemukati
Kudzivirira yakanyanyisa-yakaoma jargon iyo vateereri vako vangatadza kunzwisisa
Kuedza kusasangana nekunyepedzera
Kukurumidza kupindura kumashoko uye kubvunza
Kuvandudza yakasarudzika dhizaini inokusiyanisa iwe kubva kune vanokwikwidza
Iwe unogona zvakare kuda kuisa mashoma mashoma ako uye nhengo dzechikwata kutora chikamu mune zviitiko kunze kwebhizinesi. Nekutendera vateereri vako kuti vakuzive iwe padanho repamoyo, kuvaka hukama kunofanira kuve nyore uye kubatanidzwa kunofanira kuwedzera zvakasununguka.
Iva Kwese Kwese
ne 56 muzana yevanhu vari munyika vachishandisa imwe nzira yemagariro enhau, hazvina kumbobvira zvave nyore kuwanika. Nekuita kuti zvive nyore kune yako demographic kuti uwane bhizinesi rako uye ugare wakagadziridzwa, unogona kuvachengeta vachitaurirana zvakafanana. Izvi zvinogona kazhinji kuitwa nekumhanya anehungwaru social media kushambadzira mushandirapamwe uye kushandisa akasiyana masosi. Kuve pane akati wandei masayiti kwakakosha nekuti zvinokutendera iwe kuti usvike muzana rakakura kwazvo revateereri vako. Izvi zvakare zvinogadzira netiweki yezvinhu zvese zvinosanganisira online kuvepo izvo zvinobatsira kushambadzira. Zvikasadaro, kunamatira neimwe chete kana maviri network kunogona kudzikisira maitiro ako uye kuita.
Pakutanga, mabhizinesi mazhinji anotanga nesarudzo dzakanyatsonaka uye vanogadzira ma profiles pa Facebook ne Twitter. Kana iwe uri kutsvaga kunetwork nevamwe vezvemabhizinesi, LinkedIn neGoogle + zvinobatsira. Zvemifananidzo centric kushambadzira, Pinterest, Instagram uye Tumblr sarudzo dzakanaka. Youtube yakakwana yekubatanidza mavhidhiyo. Kune mamwe masocial bookmarking saiti senge Reddit, Stumbleupon uye Digg ayo anogona kuitora kana nhanho imwe kumberi.
Tora Vateereri Vako muChiito
Vanhu vane chishuwo chechisikigo chekuda kuverengerwa, saka kutora mari pachishuwo ichi kunogona kubatsira. Semuenzaniso, kukurudzira vaverengi kutsanangura pane blog blog uye kutanga nhaurirano kunogona kumisikidza mwero wekubatanidzwa. Kuita izvi kunouraya shiri mbiri nedombo rimwe nekuti zvinokutendera kuti udyidzane nevaverengi uye vaverengi vako kuti vabatane. Panguva imwecheteyo, ndiyo nzira yakakwana yekuwana mhinduro yakakosha.
Kune bhizimusi-rakagadzirwa bhizimusi, unogona kukumbira vatengi kuti vatumire mifananidzo yavo vachishandisa chigadzirwa uye vozvitumira pawebhusaiti yako kana maficha enhau enhau. Imwe pfungwa iri kuita makwikwi uko uyo anokunda anogamuchira mubairo wemari, koponi kana chigadzirwa chemahara. Muridzi weresitorendi angabvunza vateveri vepaFacebook kuti vape mazano erudzi nyowani hwedizert. Chero ani akapa pfungwa iyo inosarudzwa anokunda mubairo wepachena.
Kudzivirira kutenderera kwakashata kwemhosho uye kuisa bhizinesi rako munzira yekubudirira, zvakakosha kuti ugare uchigamuchira mhinduro isina rusaruro kubva kune vateereri vako. Kunyangwe zvingave zvisingagare zvichinakidza kunzwa makomendi, kutsoropodza kunovaka kunogona kukuudza izvo gadziridzo dzinofanirwa kuitwa. Kune rimwe divi, zvakanaka zvirevo zvinokuratidza zvauri kuita nemazvo kuti iwe ugone kusuka uye kudzokorora. Heano mamwe mazano ekuwana mhinduro.
Mhinduro Bhokisi kana Fomu
Iyi ingangodaro iri sarudzo yakatwasuka uye yakakwana yekutarisa nzvimbo dzedambudziko. Kune vashandisi veWordPress, kune akawanda plugins anowanikwa ayo anokurumidza kuisa bhokisi remhinduro kana fomu. Kazhinji, ivo vanofanirwa kuiswa mubarbar yepadivi sewijeti kana seimwe peji peji pasi pemusoro wewebhusaiti. Zvimwe zvinongobvumidza makomendi akapusa, uye mamwe akaomesesa uye anotendera vateereri vako kuyera zvirevo zvebhizinesi rako.
Ongororo inzira huru yekuona kugutsikana kwevateereri vako uye hwaro hwevatengi. Idzowo imwe yedzakareruka nzira dzekuona dzakanaka uye dzisina kunaka mapatani. Nekushandisa chikuva senge Survey Monkey, iwe unogona kugadzira ongororo dzakanangana nebhizinesi rako. Mushure mekugadzira ongororo, sarudzo kana bvunzo, dzinogona kutumirwa kune vateereri vako kuburikidza neemail, Twitter, vatengi vevatengi, nezvimwe. Sezvo vanhu vazhinji vaine hupenyu hwakabatikana uye vasingade kuzadza ongororo dzakareba dzine mhepo, zvinowanzova zvakanaka kuzvichengeta yakapusa isina inopfuura gumi mibvunzo. Kunyangwe, maererano KISSmetrics, iyo yakanaka ongororo ine mibvunzo mishanu chete. Nekudaro, zvine hungwaru kubvunza chete yakakosha mibvunzo iyo vanhu vanogona kukurumidza kuzadza.
Chekupedzisira, kushandisa chikuva chakaomesesa kuongorora maitiro evateereri kunogona kukupa iwe ruzivo rwakakosha. Iyo chikuva chesarudzo kumabhizinesi mazhinji ari Google Analytics nekuti iri yemahara, iri nyore kushandisa uye yakazara kwazvo.
Inoratidzira kuwanda kwedata kusanganisira mutauro wevashandisi uye nzvimbo, traffic masosi, vashandisi vakareba sei kugara pane yako saiti uye izvo zvishandiso izvo vateereri vako vanoshandisa kuwana zvemukati. Iyo zvakare ine mu-peji analytics izvo zvinoratidza izvo zvikamu zvewebhu webhusaiti zviri kugamuchira zvakanyanya kudzvanywa.
Bhizinesi njere uye data yekuchengetedza inzvimbo mbiri dziri kuwedzera kukosha, zvakare. Kuunganidza uye kuongorora vatengi mhinduro (pamwe nemaitiro evashandisi, tinya-kuburikidza data, uye zvimwe zvakawanda) zvakakosha pakuziva matambudziko nemikana, wozoshandisa pazviri.
Panyaya yeSEO, Google Analytics inopa runyorwa rwemazwi akakosha ayo vashandisi vapinda kuti vawane zvemukati. Iyi papuratifomu zvakare inoputsa yega yega yega yemukati yezvinyorwa pasi kuti iwe uzive kuti ndeapi machira ari kugamuchira akawanda maonero. Nekuisa iyi yese data pamwechete, iwe unogona kuwana kongiri mhinduro kuti ubatsire nezveramangwana zvigadzirwa zvemukati uye kushambadzira.
Tags: kuvandudza vateereriSocial Media Marketing
Iyo 5 Minute Gwara Rekuwana Iri Basa Mune Yemagariro Midhiya
Jun 6, 2013 pa7: 58AM
kushandisa chikuva chakaomesesa kuongorora maitiro evateereri kunogona kukupa iwe ruzivo rwakakosha.